Kuvandudza: The Holly Bobo Case
Tennessee Mukoti Mudzidzi Akadzingwa Kubva Musha
Musi waApril 13, 2011, Clint Bobo weParsons, Tennessee akaona hanzvadzi yake Holly Bobo, mudzidzi ane makore makumi maviri nemakore anoyera, achitungamirirwa mumapango nemurume akapfekedzwa. Mapurisa akazoziva kuti akanga achidzingwa nemurume uye akanga achitya hupenyu hwake.
Heano zviitiko zvitsva zviri muHolly Bobo case:
Gumiguru 18, 2015 - Vatsigiri vehurumende vakapa chirevo chekuparadzanisa nyaya dzevarume vatatu vanopomerwa mhosva yekuponda uye kutora muhomwe yeHolly Bobo.
Zach Adams, Dylan Adams, uye Jason Autry vose vanotarisana nemigumo yekufa kana vakawanikwa vane mhosva.
Panguva ino, Mutongi Creed McGinley akati haatarisi kuti miedzo inotanga kusvika 2017.
Kunzwa kusati kwasarudzwa pamusana wekutengesa miedzo yevarume vatatu. Kana akapiwa, Zach Adams, munun'una wake Dylan naJason Autry vose vachaedzwa pamwe chete nokuda kwekuuraya kwaBhobo.
Vaya vatatu vari mujeri kwemakore anopfuura, uye hapana zuva rekuedza rakagadzirirwa. Mutongi McGinley akaudza vatongi venyaya iyi kuti iye anoda kuti nyaya yacho iende nokukurumidza sezvinobvira.
"Nyaya iyi ndiyo inonyanya kukoshesa uye dare rakarondedzera nyaya iyi seimwe," akadaro. "Ndiri kuda kufambisa nyaya iyi pamwe chete asi tine zvipingamupinyi zvinokosha."
Mutongi akati nzira yekuwana ndeyekuti nyaya yacho iri kufambira mberi zvishoma nezvishoma.
"Tine zvipingamupinyi zvinokosha nekuti kuwanikwa munyaya iyi," Mutongi McGinley akati.
"Pandinoti izvi zvakaoma izvo zvisingatauri."
Izvo zvinonzi zvinopfuura mazana matanhatu zvapupu zvakarongwa kuti zvipupurire munyaya yacho, uye inofungidzirwa kuti zvinyorwa 150 000 zvakashandurwa kune avo vanozvimiririra varairi mukutsvaga. Mafaira acho akatora madhiyabhites mana ematenga, nzvimbo dzezvematongerwo enyika dzakati.
"Uyu waiva makore mana, kunyatsotsvakurudzwa neBusiness Tennessee Bureau of Investigation uye vaitevera mutungamiri wese," Muchuchisi Ray Lepone akati. "Vakanyora zvinhu zvose zvavakaita zvakanaka uye ndizvo zvamunopedza nemapeji 180 000 mune faira."
Mumwe mutauri wemhuri yeBobo akaudza vatori venhau kuti vakaodzwa mwoyo nekuramba kunonoka.
"Mhuri inonyadziswa asi ini ndinofunga mutongi akazvitaura apo paakati aida kungozviita kamwechete uye achiita zvakarurama," akadaro Pastor Don Franks. "Tinobvumirana zvakakwana uye zvakakwana nemafungiro evatongi panyaya yekuedzwa."
Kutongwa Kunotendeuka Bobo Uchapupu
Nyamavhuvhu 15, 2016 - Vatongi vezvemhosva yevarume vatatu vanotarisana nechirwere chekufa kwekubata, kubata, nekuponda kwechikoro chekurapa muTennessee iye zvino vane ruzivo rwehumwe huchapupu hunopikisa vatengi vavo. Vatambudzi vakashandura zviuru zvemapeji ehupowo muHolly Bobo case.
Matt Maddox, gweta rekuzvidzivirira kwaJohn Dylan Adams, akati mafaira akabudiswa nehutongerwo enyika akaenzana nemadhiabhetes akawanda ematare. Vatsigiri vezvokudzivirira Adams, munun'una wake Zachary Adams, naJason Autry vari kubhadhara rubatsiro rwepamutemo rwezvemitemo kuchinja kuburikidza nemashoko aya.
Maddox akati chinonyanya kukosha ndechokuti ave nekodzero yekupa mazano kune avo vashandi.
"Nemhaka yechinangwa chehurumende yekutsvaga chirango chekufa, mumiririri ane kodzero yekupa mazano maviri," akadaro Maddox. "... Pane imwe nguva ndava ne-mazano, tichadzokorora kuwanikwa uye tinopfuurira kuburikidza nazvo."
3 Kutarisana nerufu muBobo Case
Gumiguru 3, 2015 - Vatsigiri vezvematongerwo enyika vakataura vavariro yavo yekutsvaga chirango chekufa kwevarume vatatu vanopomerwa mukubata, kubata, uye kuuraya mudzidzi wekoti weTennessee Holly Bobo. Jason Autry, Zachary Adams, naJohn Dylan Adams vachatarisana nechirwere chekufa kana vachatongerwa kufa kwaBhobo.
Mukudhinda chiziviso nedare rechirwere chekufa, mutevedzeri chaiye Jennifer Nichols akanyora, "Kuuraya kwakanyanya kunyangadza, kusuruvara kana utsinye pakuti zvaisanganisira kutambudzirwa kana kushungurudzwa kwakakomba mumuviri kupfuura izvo zvakafanira kubereka rufu."
Vane vatatu vakapomerwa mwedzi wakapera nejeri guru rekutengesa kuuraya uye kuponda mukutambudzwa kwekupambwa kwakanyanya uye kubatwa zvakanyanya.
Pamwe chete, mumwe nomumwe anotarisana nemhosva mitatu maererano nehupenyu hwaBobo.
Varume vacho vakadzokorora zvakare vhiki ino mushure mokunge mhosva dzavaipomerwa dzichibatanidzwa. Vakaonekwa vari muchivanze vakapfeka zvipfeko zvejeri.
Hapana zuva rakagadzirirwa miedzo yavo.
Mutatu Wekutengesa muBhobo Murder
May 21, 2015 - Murume wechitatu akatongerwa kubatwa uye kuuraya muHolly Bobo kesi. John Dylan Adams, uyo akambopomerwa mhosva mbiri dzekubatwa chibharo munyaya iyi, iye zvino akambomira mhosva yekutengesa dhigirii uye kuponda mukutanga kwekupambwa kwechimbichimbi uye kubatwa zvakanyanya.
Adams ndiye munin'ina waZachary Adams, uyo pamwe naJason Autry, vaimbopomerwa mhosva yekuponda nekubvuta kwechikoro chemukoti weTennessee, uyo akadzingwa kubva kumba kwake musi waApril 13, 2011.
Vashandi vakawana zvisikwa zvevanhu zvaizivikanwa seBhobo muDecatur County, Tennessee munaSeptember 2014. Hapana zuva rekutongwa rakarongerwa kune chero vapomerwa vanopomerwa mhosva yacho.
Gweta Rekudzivirira Anoda Bobo Uchapupu
Mar. 18, 2015 - Mumwe wevatongi vanodzivirira murume akapomerwa mhosva yekuponda mudzidzi wevanamukoti muTennessee Holly Bobo akaisa chirevo chokuti chikonzero chinopesana nemutengi wake chigadziriswe, mhosva yacho inodonhedzwa, kana kuti mutongi ari kushorwa nedare .
John Herbison, mumwe wevatongi veJason Autry, uyo ave ari mujeri kubvira muna April 2014, akati mutongi akamboti vatongi vabvumire humwe uchapupu hunopesana nevarwi vake pakupera kwaDecember 2014 uye vasati vamboita kudaro.
"Mutemo weUnited States unotipa kodzero yekuziva kuti iye akatongerwa uye nei tisisina chikonzero," akadaro Fletcher Long, mumwe gweta reAustry.
Herbison akati anonzwisisa kuti vatatu vezvematongerwo enyika vakashanda pachikwata cheBobo sezvo Autry akambirwa mhosva, asi kunonoka hakubviri. "Tiri kutadza kutsungirira," Herbison akaudza vatori venhau.
Hapana zuva rakagadzirirwa kuti rinzwe kufamba kwaHerbison.
Feb. 23, 2015 - Murume akambova nechirwere chekuchengetedza utachiona kupupura muHolly Bobo kupupurirwa, zvisati zvaitwa, akawanikwa akafa. Shayne Austin akazvipira kuzviuraya kunze kwehurumende maererano nemhosva yake, Luke Evans.
"Zviri pachena kuti kurasikirwa kukuru kwemhuri yeAustin uye ivo vari kunze kwavo pachavo nokuchema," Evans akaudza vatori venhau. "Zvinosuruvarisa kuti hurumende inopinda uye yakagadzirisa nyaya dzisina mhosva, vanhu vaifanira kurarama nemhosva idzodzo ... pasi pegore rezvimhosva."
Austin, ane makore makumi matatu nemasere, akasaina chibvumirano chekuzvidzivirira pamusi waMarch 6, 2014, vhiki mushure meZachary Adams akatongerwa mhosva yokubata uye kuuraya munyaya yacho, asi Jason Autry asati apomerwa mhosva idzi.
Asi gare gare, aimbova Attorney weChitamende Hansel McCadams akadzivisa hutachiwana hutano nokuti akati Austin akanga asina kutendeseka uye akanga asingabatsiri.
Apo chirwere chisina kudzivirirwa chakabviswa, Austin akatonga mhosva kumanikidzira vatongi nevatsvakurudzi kuti vabereke uchapupu hwokuti vabatsire mhaka yavo yokuti Austin akanga asina kutendeseka kana kusabatana.
"Havasati vauye chiitiko chipi zvacho chekusimbisa zvavanopomerwa kuti varatidze kuti akanga asiri wenhema," Evans akati.
"Akachengetedza izvi kubva pakutanga, kuti haana chaanoita nemamiriro ezvinhu akaoma akawira kunaMo. Bobo."
Austin haana kumbopomerwa mhosva kana kupomerwa mhosva. Zvisinei, akaramba ari munhu anofarira munyaya yacho.
Bobo Suspects Vanoda Mahomwe Akaderedzwa
Jan 2, 2015 - Varume vaviri vanopomerwa mhosva yokupambwa uye kuponda kwaHolly Bobo vakakumbira mutongi kuti abvise mhosva dzavari kupomerwa nokuti varairi vavo vakati havana kuona humwe uchapupu hunovabatanidza kumuuraya kwake.
Zvechokwadi, vati vatsigiri veZach Adams naJason Autry, vatsiriri vehurumende havana kutendeukira kune uchapupu hupi hunoratidza kuti mudzidzisi wekurera muTennessee afa.
"Zvingaonekwa kwandiri kana vaine bhehenya rine mazino avo vaizotipa iyo pakarepo.Icho chiri kunyunyuta zvishoma nei tisina hurumende iyo," Mutongi weAustry Fletcher Long akaudza vatori venhau.
Musi waChishanu 17, Mutongi Cedric McGinley akarayira hurumende kuti ichitanga kuchinja humwe uchapupu hunokosha kune kudzivirirwa musi waDecember 24. Long vanoti vatongi vakashaya musi iwoyo. Vaiti havana kugamuchira humwe uchapupu hunobatanidza Adams naVidry kuti vauraye.
"Zvingaita sokuti kwandiri mumhosva yekuuraya chinhu chokutanga chavanoda kutipa ndechekuti mumwe munhu akaurayiwa," akadaro Long.
Kuchinja kweNzvimbo Zvichida muBhobo Case
Dec. 17, 2014 - Mutongi anotungamirira chikamu cheHolly Bobo akaratidza kuti achabvumira kupa mhosva kune avo vanopomerwa kuti vashandure nzvimbo iyo pavanoshaniswa. Mutongi C. Creed McKinley wakati panguva yekunzwa kuti aifunga kuti hazvibviri kuwana jeri risina tsarura muDecatur County nekuda kwekupararira kwemashoko uye manzwiro munharaunda.
Nhengo dzevatongi veZachary Adams naJason Autry, vose vakapomerwa mhosva yekuuraya uye kuuraya kwaBhobo, vakati vaizoshandura nzvimbo dzekutengesa mushure mokunge misi miedzo yaiswa.
Uyewo panguva yekutongwa, Mutongi McKinley akanyunyuta kanopfuura kamwe pamusoro pokushayikwa kwekufambira mberi munyaya yacho. Akanyevera Gweta reDare reMat Stowe kuti humwe humwe uchapupu hunodiwa kuti hudzoserwe kune avo vanozvidzivirira nevatamburi vaifanira kuita chisarudzo pamusoro pokutsvaga chirango chekufa.
Zvichakadaro, Stowe akatsika semuparidzi munyaya yacho. Mushure mekunge kukakavadzana kwekare neBusiness Tennessee yeInvestigation yakazoita kuti TBI ibvise kutsigirwa kwayo kubva kumatare edzimhosva yose, Stowe akasarudza kuisa mutongi anokosha weHolly Bobo kesi.
Somugumisiro, TBI yakavazve zvakare nekuongorora.
Murume Anobhadharwa Nezvikamu zviviri zveKubata
Gumiguru 14, 2014 - Murume akambopomerwa mhosva yekurasa uchapupu muHolly Bobo nyaya, iye zvino akatongerwa mhosva mbiri dzekubatwa chibharo sezvo kuongorora pamusoro pekufa kwechikoro chemukoti weTennessee kuchiripo. John Dylan Adams, uyo akatongerwa vhiki ino, ndiye munun'una waZachary Adams uyo akatongerwa kubata uye kuuraya munyaya iyi.
Vatsvakurudza vakati John Adams akabvuma mwedzi wapera kuti akarova Bobo. Akapomerwa mhosva nedare guru rejeri panhengo vhiki ino.
John Adams ari kusungirwa pasina bhaari mujeri reRobertson County, maererano neTBI. Musi waSeptember 7, masara eBhobo akawanikwa nevashambadzi pasi pemakiromita makumi maviri kubva kumba kwaZachary Adams.
Iyo TBI yakaramba ichitaura kuti kupfuurira kweBhobo kwave kwakanyanya kudhura munhoroondo yebasa.
Mumwe Kusungwa muHolly Bobo Murder
Sept. 20, 2014 - Imwe hama yemhosva yekuponda kwechiremba weTennessee muchengeti wehutano, Holly Bobo, yakasungwa maererano nedare racho uye rakapomerwa kupesana neuchapupu. John Dylan Adams, munin'ina waZach Adams, akanga achibatwa asina kusungwa mujeri reMadison County.
Maererano nedare reTennessee reInvestigation, Adams "akaisa zvinhu zvaaiziva kuti zvine uchapupu hunokosha kune iyo nyaya."
Adams kusungwa inokonzera vanhu vashanu vakambomira mhosva yeBobo case, neyemhosva yechitanhatu inotarisana nepamusoro inogona kupomerwa mukuru wehurumende yemhosva pashure pokunge apiwa chirwere chekuzvidzivirira.
Zach Adams akatongerwa mhosva yekuuraya uye kuwedzera kukunda munyaya iyi. Jason Autry akambomirawo mhosva yekubatwa kwakanyanya uye yekutanga-degree felony kuuraya.
Hama Jeffrey naMark Pearcy vave vachipomerwa mhosva yekuputira humwe uchapupu uye zvinyorwa shure kwechokwadi. Shayne Austin, uyo akapiwa chirwere chekuchengetedzwa kwemajeri, anotarisana nemhosva inopomerwa mhosva.
Sept. 9, 2014 - Vanhu vanowanikwa nevanhu vaviri vakanga vachichera ginseng root muDecatur County, Tennessee vakave vakaonekwa sevaya vasina kurasikirwa mudzidzi Holly Bobo. Tsanga revanhu rakawanikwa pedyo neimba yeimba yaZachary Adams, munhu ane mhosva mumhosva yacho.
Bobo akadzingwa kubva kumba kwake muParsons, anenge makiromita anenge gumi kumaodzanyemba kwemahombekombe eHolladay, pedo neAdams aigara uye kwaanogara. Vavhimi havana kugadzira dhehenya; yakawanikwa yakagara pasi, vatungamiri veTTI vakati.
Mazuva maviri mushure mekuwanikwa kwehenya uye zuva rakatevera vakuru veTennessee Bureau of Investigation vakatsigira kuti ndiHolly Bobo, gurukota guru rakapomerwa Adams pamusoro pekuponda uye kupamba mhosva. District Attorney Matt Stowe akati anoronga kuita chisarudzo chekutsvaga chirango chinogona kuurayiwa mushure mekutaurirana nemhuri yaBhobo.
"Uchapupu hwakawanda," akadaro Stowe. "Tichava nechokwadi chokuti munhu wese akaita chikamu mumhosva yakaipa iyo yakarwisa rugare nerukudzo rwehurumende yeTennessee inosangana nemigumisiro yeiyo."
Mumwe musungurudzi wechipiri, Jason Autry, akambomira mhosva yekuponda uye kuuraya munyaya yacho. Iye naAdams havana mhosva vasina mhosva.
Hama mbiri, Jeffrey Kurt Pearcy naMark Pearcy, vakapomerwa mhosva yokuputira humwe uchapupu uye zvigadziriswa mushure menyaya yacho. Izvo zvakare vakatsigira mhosva.
Bobo vemumhuri mutevedzeri Steve Farese vakati mhuri iyi yakakumbira hupombwe panguva ino.
"Tinotenda kuti tine kodzero yekuchema tiri voga semhuri, uye senharaunda," akadaro. "Ino ndiyo nguva yekuchema. Ndapota, rumbidzai chikumbiro chedu."
Mukadzi Akaona Video yaHolly Bobo
July 30, 2014 - Uchapupu hwekutanga kune mumwe wevarume vakapomerwa kuti ave mune zvigaro muHolly Bobo nyaya yakatsigira kuvapo kwevhidhiyo imwe chete yechikoro chekurapa muTennessee chinoshungurudzwa neabductor.
Sandra King, mukadzi akapa Jeffrey Kurt Pearcy nzvimbo yekugara kuitira kuti vanakomana vake vagone kupedza chikoro, vakapupurira kuti akamuratidza vhidhiyo yakaratidza Holly Bobo akasungirirwa uye achichema. Pearcy ave akatongerwa nekuputika neuchapupu uye zvinowanikwa mushure menyaya yacho.
Mambo akaudza dare kuti akatarisa zvishoma kweminiti yemavhidhiyo ndokubva ataurira Pearcy kuti avhure. Akati haasati ataurirana nemapurisa pamusoro payo kwemavhiki mashomanana nokuti akanga asingazivi kuti aida kubatanidzwa.
"Zvaiita seHolly Bobo," akadaro. "Zvaityisa kuzviona."
Mambo zvakare akapupura kuti Pearcy akamuudza kuti munun'una wake, Mark Pearcy, ane vhidhiyo inoratidza Zachary Adams kuita zvepabonde naBhobo. Mark Pearcy anonziwo anowanikwa mune imwe nyaya. Zachary Adams naJason Autry vakambomira mhosva yekubatwa uye kuuraya.
Uyewo pakunzwa, Agent weTBI Brent Booth akaudza mutongi kuti ane nhaka yePaul Percy foni uye ari kumirira kero kubva kuApple kuitira kuti akwanise kuiwana.
Mutongi akatonga kune humwe uchapupu hwakakwana hwokusunga Jeffrey Pearcy kuenda kumakurukota makuru. Mhemberero yekutanga yeMark Pearcy yakarongwa muna August.
Varume Vaviri Vakawanda Vanotorwa muBhobo Case
Nhamba yevatongi vanoramba vachiwedzerwa muHolly Bobo. Vamwe varume vaviri vakambomira mhosva maererano nekunyangarika kwechikoro chekuyamwisa chidiki cheTennessee.
Hama mbiri, Jeffrey Kurt Pearcy naMark Pearcy, vari kutarisana nemhosva yekuputira humwe uchapupu uye zvigadziriswa mushure mekunyorwa uye kuponda kweBobo, akadaro Josh DeVine weBennessee Bureau of Investigation.
Mhosva idzi dzinotangira kubva pakuziva kwavo kana kuti kuva nevhidhiyo yakatorwa naBhobo mushure mekunge abviswa kubva kumba kwake. DeVine haafaniri kupa mamwe mashoko.
Asi, Olin Baker, Jeffrey Pearcy, gweta remhosva, akati hakuna video yakadaro kana kurekodi, maererano nekambani yake.
"Anoti hakuna chokwadi kwavari, hapana vhidhiyo." Akabvunzwa pamusoro payo neTBI, uye ivo vari kunze kwekutaura vachiita kusungwa. "TBI iri pamba yekufambisa," Baker akaudza vatori venhau.
Jeffrey Pearcy's bond yakagadzirirwa pa $ 25,000. Mark Pearcy, uyo anonyadzisa kunyoresa zvepabonde, ari kusungwa asina kusungwa muHenderson County Jail.
CBS Nhau: 2 Zvimwe Zvakatorwa muChiitiko Chekushaya Mudzidzi Mukoti Holly Bobo
Kusagadzikana Kupikisana kweBhobo Chapupu Kunotungamirirwa Dare
March 28, 2014 - Murume ane makore 29 muTennessee uyo akapiwa rusununguko munaMuvhu muHolly Bobo nyaya pamwe chete nekubvumirana kwake akanga atumira mhosva yaiti vatambudzi vakaputsa chibvumirano pavakazobvisa chibvumirano ichocho.
Mutongi uyu akaiswa mumatare ejeri naShane Austin, gweta, asi Mutongi Carma D. McGee akabvumirana neMubatsiri weGweta Gweta reScott Sutherland kuti dare repamusoro harina simba pamusoro pemhosva uye dare redzimhosva rinogona kugadzirisa nyaya yacho.
Chibvumirano cheAustin chekuzvidzivirira chakamupa kudzivirirwa kubva pakutongwa kwe "zvose zvinokonzerwa nemhosva, kuparadzwa, kuvigwa, uye / kana kuvanza muviri waBobo wakafa."
Vatambudzi vakavhiringidza hutachiona hwekuzvidzivirira mushure mekuda nokuti vakati Austin akanga asina chokwadi navo.
Maererano nedare remabhuku, chibvumirano chacho chaive chichienderana nebviri raBhobo rawanikwa. Hazvina kuwanikwa zvakare. Izvo zvakasanganisira kusachengetedzwa kwaAustin pamhosva yezvine zvinodhaka "kusaisa chero mishonga inobatwa naHolly Lynn Bobo."
Kana kuregererwa kwechirwere chekuchengetedzwa kwemasikirwo kunomira mumatare emhosva, Austin anogona kupomerwa mhosva, maererano nedare remabhuku.
Kusagadzikana kukakavadzana muHolly Bobo mhosva kunotungamirirwa kudare remhosva
3rd Man Kutarirwa muHolly Bobo Kidnapping
Murume wechitatu, uyo akanga atanga kuponeswa kubva kune mhosva mumhosva, iye zvino angapomerwa mhosva pamwe chete nevasungwa vaviri vekare mukupamba nekuuraya kwechikoro chekurapa muTennessee Holly Bobo. Shayne Austin anotarisirwa kupiwa mhosva pamwe chete naZachary Adams naJason Autry.
Murume wechipiri Akabatwa muHolly Bobo Case
Jason Wayne Autry, anogara kwenguva refu neshamwari yemumwe murume akabatwa mberi kwekubata uye kuuraya munyaya iyi, iye zvino akatarisana nemhosva dzakadaro maererano neHolly Bobo kuparara. Autry naZachary Adams vakambomira mhosva yekuuraya chiremba uye kuwedzera kukunda.
Zvitsva Zvitsva zvakagadzirwa muBobo Case
Murume akabatwa mukupamba uye kuponda kweHolly Bobo uye akabatwa vasina bvumo iye zvino akatarisana nemhosva dzakawanda nekuda kwekutyisidzira kupomerwa munyaya yacho. Chiratidzo Zachary Adams akatyisidzira ndeyehama yake.
Murume Akapiwa muHolly Bobo Case
Mapurisa akapikira Zachary Adams nekubatwa kwakanyanya uye kuponda kwemazinga ekutanga muHolly Bobo nyaya mushure mekutsvakurudza kwakanyanya kweimba yake neimba. Adams iri kubatwa pasina musungo kunyange zvazvo mutumbi wevadzidzi vasina ruzivo mucheche usina kuwanikwa.
Musha Wakatsvaga mu Holly Bobo Case
Mushure memakore anenge maviri, vatsvakurudzi vakatanga kuenderera mberi muHolly Bobo apo vakauraya mazita akawanda ekutsvaga kutsvaga, kusanganisira imwe yemba neimba yemurume akabatwa pane kurwisana kusina kukodzera kune mumwe mukadzi. Kurwisa kwakaitika kumba kwake.
Mapurisa Tsvagai Rubatsiro muHolly Bobo Case
Mushure mekutevera zvinopfuura 250 zvinotungamirira munyaya yemudzidzi ane makore makumi maviri anorerati, amai veTennessee vakakumbira rubatsiro rwevanhu munharaunda duku yeParsons. Hapana vari kukanganisa kana vanhu vanofarira vanove vakaonekwa munyaya yeHolly Bobo yekunyangarika.
Anouraya Roseann Quinn
Shawn Hornbeck Kubata Mhuka: Sei Asina Kutiza Kubva Wake Wake Captor
Muurayi waAd Adam Walsh Anonzi Makore Makore 27
Mhosva uye Miedzo yaLyle naErik Menendez
Hondo Yenyika I: Hondo yeSomme
Isita muGermany Chimiro Chekufambisa Here?
Kushorwa muEvhangeri dzeEvhangeri dzeBumbi raJesu
Mavhesi Akakosha Awo Mazita
Mufananidzo Wakanakisisa-Wakanyanya Kupfuura Oscar Winners (1990-2015)
Ukama Between Exchange Rates uye Mutengo wemari
Chii Chinonzi Arbitrage?
Inobatsira chiJapan Zvirevo
8 Nzvimbo dzekuisa Mhuri Yenyu Pakupedzisira
'Elektra' Synopsis: Nhau yaRichard Strauss 'One-Act Opera
5 Misimboti yekutanga yekuva nevaeni vanogara muKoreji
Nyaya yeOrville Wright
Lady Pink (kana kuti Pink Lady Tournament)
Icho Chinofanira Kugadziriswa Nyaya Yokuva Iga-Yakapetwa Kana Yakaviri-Yakaparadzana?
Kuziva Kutadza Kwemutauro uye Matambudziko
Tiger Woods 'Purogiramu: Ari Kupi Gorofu Inotevera?
Dhinda uye Dhinda Periodic Tables
Top Five GMAT Kudzidza Mistakes
Nzira Yokushandisa Nayo ChiFrench cheFrench 'Faillir'
FAKE Amber Alert "72B 381" Inopararira Kure Nenyika (uye Fast) kuburikidza neSocial Media